Ragaan Maastar Pilaanin Hojirra Oolaa jiraachuu Saaxilu Argame
Date: December 17, 2015Author: Oromedia 0 Comments
(Oromedia, Finfinnee, 16 Mudde 2015) Mootummaan Wayyaanee pirojeektii saamicha lafa Oromiyaa ittiin samuuf baafate dhoksaan hojiitti akka hiikamu hojjachaa jiraachuu ragaan saaxilu argame.
Ragaan kun kan saaxilame yeroo abbootiin taayitaa wayyaanee dabaree dabaree miidiyaatti bahuun akka waan pirojeektiin maastar pilaanii dhaabbateetti dubabtaa jiran keessatti ta’uun hubatamee jira.
Ragaan amma argamaa jiru, waan abbootiin taayitaa wayayanee ibsan kan faallessuudha.
Labsiin doorsisaa mudde 16 bara 2015 galgala wayyaaneen baaftes diddaafi murannoo Oromootaatin simatamee jira.
Sababa kanaan Wayyaaneen, ammas kijiba biraatin as baatee jirti.
Akka wayyaanoti ibsaa jiranitti, biiroon Maastar Pilaani cufamee jira.
Kun garuu ololaa fi kijiba Abbaan Duulaafi Muktaar Kadir ittiin as bahan taúu ragaa qabatamaa Maastar Pilaanin hojirra oolaa jiraachuu agarsiisu argamee jira.
Akkuma yaadattan Abbaaan Duulaa ” Maastar Pilaaniin bara 2006 ALH irraa kaasee hamma ummanni mari’atuu dhaabbataa jira jedhee oduu dhugaa irraa fagaate ibsee ture.
Sun soba ta’uu bariisama san ragaan saaxile.
Ragaan qabatamaan kun akka agarsiisutti, Maastar Pilaniin dhaabbachuu mitii daranuu jabaatee itti fufuuf beeksisa qaxarrii hojii gaazezaa addis Zaman irratti baasuun beekame. Kijibni sun guyyaa adii saaxil baanaan amma kijiba biraa kan sanirra guddaa irratti dabalan.
Kunis soba ta’uu maalin beeyna?
Waajjirri Maastar Pilaaniin bara 2006 akka hin diigamin ragaa kumaaa-kitilatu jira.
1) Waajjirri kun bara 2007 keessa yoo cufamee jiraata bara 2007 baajanni birrii 30,424.847 maalif ramadamee? Bara 2008 hoo maalif Birrii 33, 511,595 akkamiin ramade? ( ragaalee asiin maxxananii jiraan laalaa)
2) Beeksisa hojii kana kan baase namoot mootummaan hin beekne kan jedhameef; mee rabbii jedhaati beeksifni waajjira mootummaa tokko gaazexaa mootummaa irratti beekkamtii mootummaatin ala, biyya Itoophiyaa keessatti bahe yoo isinin jedhan bishaaninuu liqimsituu laata?
3) WaajjirrI Maastar Pilaanii waggaa lama dura cufame jedhame Wiixata dheengaddaa banaa turuuun shakkii miti. Kana ammoo dhihotti ragaa qabatamaan as baafna.
Ummati Oromoo maal gochuu qaba?
Wayyaaneen lafa ummata Oromoo saamuuf waa’ee maastar pilaanii baafatee ture. Kun immoo lubbuu fi jireenya ummata Oromoo kan balleessu taúun hubatameera.
Umamti Oromoo diddaa haqaa fi bilisummaaf gaggeessu jabeessee itti fufuu akka qabu himamaa jira.
Akak odeessa nu gahaa jirutti, sagaleen ummata Oromoo dhageettii argachuu kan eegale, diddaan isaa jabaachuu irraa ti.
Ummati ajbatee mirga isa afalmate, ofiif darbu illee dhala isaaf waan hin darbine kaayee darba,” kan jedhan madeen keenya, maastar pilaaniin saamicha lafa Oromoo irratti akeekkate akka dhaabbatuuf ummati Oromoo hidhannoo isaa jabeeffatee falmaa maraalessa gaggeessuu finiinsuu akkak qabu odeessi nu gahaa jiru ni hubachiisa.
Previous Previous post: በኦሮሚያ ግጭት ሕይወት እየጠፋና ንብረት እየወደመ ነው
Next Next post: የመጨረሻዉ አማራጭ ካርድ